Endri-tsoratra tsara tarehy: inona izy ireo ary iza aminay no manoro hevitra anao hampiasainao | Famoronana an-tserasera
Rehefa tsy maintsy ataonao ny fonon'ny boky, ny afisy fampisehoana, na ny doka amin'ny orinasa, iray amin'ireo fitaovana lehibe indrindra ho an'ny mpamorona sy mpamolavola, tsy isalasalana fa typografika. Tena, mila endri-tsoratra tsara tarehy mifanaraka amin'ny votoatin'ny zavatra noforoninao ianao. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe tsy maintsy manao fampisehoana ho an'ny Halloween ianao; mila fontso miaraka amina litera "maizina", "vampiric", sns. Saingy tsy ho izy ireo ihany no ampiasainao amin'ny Andron'ny mpifankatia, sa tsy izany?
Ireo endri-tsoratra tsara tarehy dia voarindra. Ary io no mety ho tsara toa anao, amin'ny olon-kafa tsy mety. Noho io antony io, rehefa manolotra tetikasa, dia tsara kokoa ny manana karazana taratasy maro hanolorana azy ary ny mpanjifa farany no misafidy izay tiany indrindra; toy izay mametraka ny tianao aloha. Fa inona no heverina ho typeface tsara tarehy?
1 Inona ny endritsoratra?
1.1 Ary ireo endritsoratra tsara tarehy?
2 Endri-tsoratra tsara tarehy izay atolotray
2.2 Fampisehoana Playfair
2.6 Endritsoratra mahafinaritra: Leira
2.8 Endritsoratra mahafinaritra: Mooglank
Inona ny endritsoratra?
Ny endritsoratra dia azo raisina ho fomba famolavolana ireo litera izay hampiasainao. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, no fomba fisarihana ireo litera (isa, marika ...) hahatratrarana vokatra hita maso ary tena samy hafa be amin'izy ireo. Mazava ho azy fa somary tsy mitovy amin'ny Lettering na Calligraphy izy io, na dia mitovy aza ireo teknika telo, indrindra amin'ny famoronana litera sy tarehintsoratra alphanumeric hafa.
Mba hanomezana hevitra anao, ny endritsoratra dia miresaka bebe kokoa amin'ny pirinty na haino aman-jery nomerika, ahafahany mahazo karazany efatra:
Serif. Ireo no karazana litera manana serif (avy eo ny anarany), misy serifs, firavaka amin'ny faran'ny, sns. Ny sasany amin'ireo malaza indrindra dia ny Times New Roman, Garamond ... Voasokajy ho endritsoratra matotra sy nentim-paharazana izy ireo, ampiasaina amin'ny lahatsoratra lehibe rehefa manamora ny famakian-dry zareo.
Sans Serif. Amin'ity tranga ity dia tsy manana miroborobo na finial izay mety hahatonga azy ireo endri-tsoratra tsara tarehy izy ireo. Ary ny fifantohan'izy ireo amin'ny varotra, mba hanomezana fahatsapana kanto, azo antoka, minimalista ary maoderina momba izay tianao haseho. Raha ny marina dia ampiasaina amin'ny afisy, dokam-barotra, sns. Ohatra amin'izany? Helvetica, Gotham, Futura ...
Slab Serif. Ny anarana iray hafa azon'izy ireo dia ny "Egyptianina". Amin'ity tranga ity dia misy serif sy farany, fa tsy toy ny Serif, matevina kokoa izy ireo ary mitady hisongadina amin'ny lohateny lehibe na amin'ny dokam-barotra. Ohatra, miaraka amin'i Clarendon.
Script. Eto isika dia afaka milaza fa eo no ahitanao ireo endri-tsoratra tsara tarehy, satria izy ireo dia endri-tsoratra miafina, miorina amin'ny endri-tsoratra namboarina tamin'ny tanana, izay manandrana mampihetsi-po. Izany no antony hahitana azy ireo amin'ny karazany maro.
Ary ireo endritsoratra tsara tarehy?
Raha ampidirintsika amin'ny endritsoratra hoe "tsara tarehy" ny adjectif dia mieritreritra ny ankamaroan'ny olona fa karazan-tsoratra tsara tarehy izy ireo. Fa izany saika ampifandraisin'izy ireo amin'ny tantaram-pitiavana ary, noho izany, amin'ny vehivavy. Saingy tsy voatery ho toy izany.
Tena typeface tsara tarehy dia iray, ho an'ny tsironao, dia. Fa raha misy tetik'asa dia mila mitarika ny tenanao ianao satria io karazana endri-tsoratra io no mety amin'ny asa tanterahinao, na boky, afisy, doka sns.
Endri-tsoratra tsara tarehy izay atolotray
Satria afaka manana karazana tetikasa maro mihazakazaka ianao ary mila endritsoratra samihafa, dia nanao safidinay izay heverinay ho endritsoratra mahafinaritra ho an'ny fampiasana samihafa. Azo antoka fa ny sasany amin'izy ireo (na maromaro) dia mandresy lahatra anao hampiasa azy ireo.
Ity typeface ity dia mifantoka amin'ny lahatsoratra lehibe, ohatra amin'ny boky, gazety, bilaogy sns. Ny tanjona dia ny hahafinaritra ny vakiteny ary tsy hanasatra ny maso izany (na mila maminavina izay voalaza ao ianao). Raha fintinina dia endritsoratra serif izy io, saingy misy kinova sans, mba hahafahanao mampiasa roa (ny iray ho an'ny lohateny ary ny iray ho an'ireo lahatsoratra).
Mifantoka amin'ny zava-drehetra ho an'ny lohateny, na lohateny tianao ho faritana tsaraManana an'ity karazana endri-tsoratra ity ianao, tena manintona azy manokana noho ireo fiolahana vokariny (izay, araka ny ho hitanao, dia saro-pantarina nefa misarika ny saina ihany). Ao aminy ihany, ity endri-tsoratra ity dia efa napetraka, noho izany ny sisa amin'ny lahatsoratra dia tokony hanana endrika somary ambany.
Anisan'ireo endritsoratra mahafinaritra, ity no iray amin'ny tsara indrindra. Izy io dia karazana litera izay manahaka ny calligraphy sy ny sora-mandry, miaraka amin'ny singa kanto. Tsy tsara ny mampiasa azy amin'ny lahatsoratra lehibe, fa kosa ho an'ny teny na andian-teny fohy dia fohy.
Ho fanampin'izay, ny loharano dia tena feno tsipiriany, noho izany dia tsy mila mavesatra loatra ny napetraka feno ianao.
Typology somary mora takatra nefa koa misy antsipiriany marobe amin'ny teny, dia Alex Brush. Izy io dia typeface mety indrindra fehezan-teny kely na teny tokana mila asongadina. Raha ny lohateny, ny sora-baventy tsy ho tsara loatra, raha mora takarina kosa ny kely.
Ity dia iray amin'ireo endri-tsoratra tsara tarehy ho an'ny gazety na ho an'ny lahatsoratra lava. Ary tena tsotra ny mahatakatra azy ary tsy mankaleo ny mijery azy. Mazava ho azy, satria tsotra dia tsotra izy io, mety hiafara amin'ny tsy fahitana azy, ka tsara kokoa ny manambatra azy amin'ny endri-tsoratra hafa izay mampiavaka ilay faritra misy ny soratra.
Endritsoratra mahafinaritra: Leira
Leira dia typeface izay mahatonga antsika hieritreritra ireo sary misy lahatsoratra hitantsika amin'ny tambajotra sosialy. Ary io taratasy io ve Amin'ny sora-baventy sy sora-baventy dia hanome fikitika hafa ny zavatra tadiavinao. Ho fanampin'izay, amin'ny tenany ihany dia efa mahavariana tokoa izany miaraka amin'ny sary any ambadika azonao hamoronana ilay tetikasa tonga lafatra.
Afaka manao typeface Serif ity mampatsiahy anao kely momba ny Garamond na ny Time New Roman, noho izany dia mety amin'ny lahatsoratra lehibe izy io. Ary koa, ny fahatsorana, ny fampifangaroana azy amin'ny endritsoratra sans-serif hafa na koa ny script dia afaka mandeha tsara.
Endritsoratra mahafinaritra: Mooglank
Te hanome fahitana "zaza" kokoa ve ianao? Tadidinao ve ny fotoana nanombohanao nanoratra ary tokony natambatra daholo ny litera? Ka izany no hitanao amin'ity typeface ity, avy amin'ny lamaody taloha ary izany dia hahatonga anao hieritreritra ankizy.
Betsaka ny endritsoratra mahafinaritra kokoa, fa ny fitanisana azy rehetra dia mety haharitra ela loatra, ankoatr'izay dia tsy maintsy manampy vaovao foana izahay mifototra amin'ny tsiro tsirairay. Iza amin'ireo no amporisihinao anay?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Endritsoratra mahafinaritra